gtalk virus — MYSTERY ZILLION
October 2008 edited November 2008 in Antivirus & Virus
gtalk ကနေ အောက်မှာရေးထားသလို လင့်တွေ၀င်လာရင် မနှိပ်ပါနဲ
နှိပ်လိုက်ရင် virus ၀င်သွားပြီး ကိုယ့် friendlist ထဲမှာ ရှိတဲ့ အခြားသူတွေကိုပါ အဲဒီလင့်တွေထပ်ပို့နေပါတယ်။ ဘာ virus အမျိုးအစား၊ ဘယ်လောက်အထိဖျက်အားပြင်းသလဲတော့ မသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ် taskmanager ပျောက်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ registry editor ၀င်လို့မရတော့ပါဘူး။
U should change the pointer for this virus url.
In case of someone wrongly click to this url that will be die. :65:
ဒါ galk သီးသန့် virus လို့ပြောလို့မရပါဘူး....
ဒီမှာက gtalk အသုံးများလို့ gtalk ကနေ လှမ်းလှမ်းပို့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ အပေါ်မှာတော့ သတိပေးထားပါတယ်.......
အသိပေးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လောပြီးမေ့သွားလို့ပါ။ ပြောင်းလိုက်ပါပြီ
MZ က အကိုတို့ရေ ၀ုိင်းပြီး အဖြေရှာပေးကြပါအုံး kasper လည်း မမိဘူးဗျ။
၁။ ကိုယ့်gtalk နဲ့ သူများတွေဆီ message တွေလျောက်ပို့တယ်
၂။ စက်ကလေးသွားတယ်။ folder တွေအောက်မှာ အဲဒီ folder နာမည်နဲ့ exe ဖိုင်တွေလိုက်ဆောက်တယ်။
၃။ task manager ၀င်လို့မရတော့ဘူး
၄။ registry editor ၀င်လို့မရတော့ဘူး
၅။ IM program (yahoo messenger, gtalk)တွေ မဖွင့်ပဲနဲ့ ပွင့်ပွင့်လာတယ်။
ငပျင်းလေးကတော့new userပါ များများကူညီပါ
ကျေးဇူး ကို mk ရေ
ဒီနေ့ဆိုင်ကိုလာမွှေသွားတယ် Recover ပြန်လုပ်လိုက်ရတယ်
သူတော်တော်ဆိုး အဟင့် လူဆိုး:((
အဲဒီလင့်ကို လူသုံးအများဆုံး Myanmar ISP တစ်ခုကတော့ Block လိုက်ပြီဗျ ...
မြန်မာနိုင်ငံထဲကသူတွေအတွက်တော့ မစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူး ..
ဖြေရှင်းမရဖြစ်နေရင်တော့ .. ဒီနေရာလေးမှာသွားကြည့်လိုက်ပါဗျာ ..
ဟုတ်တယ်ဗျို ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီvirus အကိုက်ခံ၇ပြီးပြီတော်တော်ဆိုးတာ ဗျ
(လုံး၀ click မလုပ်ရန်နှင့် ဒေါင်းလုပ် မလုပ်ရန် အထူးသတိပေးအပ်ပါသည်။)
ဒီလင့်လေးကို သုံးပြီး ဒေါင့်လော့ လုပ်ပြီး run ခဲ့မိမယ်ဆိုရင် ကိုယ် စက် ရဲ့ TaskMgr ကို ပိတ်ခံရမယ် .. Folder Option ကို ဖျောက်ခံရမယ် ... ပြီတော့ regedit ကို ပိတ်ခံရပါမယ် ... တကယ်လို ကိုက မေးဖွင့်စစ်ရင် ဒါမှ မဟုတ် Gtalk သုံး ရင် နဲ့အသုံးပြုမိခဲ့မယ်ဆိုရင် တော့ ကိုယ်မပို့ဘဲ တခြားသူဆီကို ကိုယ့်အီးမေးလိပ်စာနဲ့ ရောက်နေတတ်တယ်လိုသိရတယ် .yahoomessenger ကို ကလဲ အရင် Viurs တွေ ၀င်ရင် ထထ run တဲ့ ပုံစံအတိုင် run နေပါလိမ့်မယ် .. ဒီ Viurs က browser တွေလဲ အခြေကုတ်ပြိး run တဲ့အတွက် browser တွေမှာ ပါ ပြသနာ ရှိလာနိုင်ပါတယ် ....ပြီတော့ အနည်းအကျဉ်း ၀င်းဒိုးဖိုင်တွေကို လဲဖျက်သွားဒါကို တွေရပါလိမ့်မယ် .. စက်ထည့်းမှာရှိနေမယ်ဆိုရင် တော့ အဆင်မပြေလှ ဘူး .. ဒါကြောင့်ဒီvirusကိုသတ်နည်းလိုက ်၇ှာနေတာအခုမှဘဲတွေ ့လို ့ကျွန်တော်တွေ ့တွေ ့ချင်းကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေကိ ုတင်ပေးလိုက်တယ်နော်
AntiVir Personal 8.1.00.331အဲ ့software နဲ ့သတ်လို ့၇တယ်ဗျ
ဒီမှာdownloadလုပ်လိုက်နော်http://www.filehippo.com/download_antivir:103:
ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒီ Virus နဲ့မတွေ့လိုက်ဘူး...ဒါပေမဲ့ တွေ့လိုက်တဲ့ သူတွေ အတွက်
Myanmar It Professional website မှာ ကိုပြည့်စုံ တင်ထားတဲ့ virus သတ်နည်းလေးကို မျှပေးလိုက်ပါတယ်.....
အဲ့ဒီ လင့်လေးမှာ download လုပ်လို့ရပါတယ်....ကျွန်တော်ကတော့မစမ်းရသေးပါဘူး....စမ်းချင်သူများအတွက်...:):)
hi everyone... i am havingaproblem with the language display ... i am not able to know wat language the posts are having..can u help me with this...
2. Copy following commands showed in red color and paste them into Notepad.
REG Delete HKCU\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run /v "Yahoo Messengger" /f
REG Delete HKCU\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run /v "Yahoo! pager" /f
3. Choose Save as type: as All File (*.*) and name file as Kill-Chrome.bat or Kill-Chrome.exe and save it. (This .exe or .bat file is an executable file that can run above (red lines) one atatime)
4. Disabled your Antivirus program if you have installed one.
5. If you are using Windows Vista, Right click on the Kill-Chrome.exe or Kill-Chrome.bat file and click Run as administrator to run. For Windows XP user, double click the file to run it.
Kaspersky Up to Date နဲ့ ကိုခံလိုက်ရတာ။Anti-Virus Software မျိုးစုံပြောင်းတင်တာပဲ ရပါဘူးဗျာ နောက်ဆုံး McAfee 7.1 ကို Update လုပ်လိုက်ရော C:\_window\_system32\_chrome.exe ကို ထအော်တော့တာပဲ သူက Window ရှိတဲ့ Partition မှာ exe တွေ နဲနဲပဲ ပွားတယ် တစ်ခြား partition မှာမတရားပွားတာကိုး။ ကျနော်စက်က Partiton ၅ပိုင်း ဆိုတော့ Folder များတယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် စက်မှာ Folder ဘယ်နှစ်ဖိုင်ရှိမှန်းမသိဘူး သူကိုက်ပေးလိုက်မှ Folder နှစ်သောင်းကျော်တယ်..ဟီးဟီး အကောင်နှစ်သောင်းကျော်မိတယ်ဗျ ကျနော်ရဲ့ DATA Bank သွားပြီထင်တာ တော်သေးတယ် McAfee လေးကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဗျ
kokobobo82 wrote: »
ဟုတ်တယ်။ ထဲမှာ E-book တွေ 600 ကျော်လောက်ရှိတာအကုန် exe တွေဖြစ်ကုန်တယ်။ ဒီလောက်အကောင်အများကြီးတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ :O:O:OKasper နဲ့မိတယ်။ အခုတော့အဆင်ပြေသွားပြီ။:D:D:D:67::67:
အခုမှပဲ MZ ရဲ.ကျေးဇူးတွေပိုပြီး သိရတော.တယ်.......:D:D
ခံရခါနီးလေး MZ ကို ဖွင်.ြ့ကည်.လိုက်မိလို.။:)):)):)):))